छक्कापञ्जा र यमबुद्धको आत्महत्या प्रकरण : किन हुन्छ यस्तो? कसरी जोगिने? – MySansar
छक्कापञ्जा र यमबुद्धको आत्महत्या प्रकरण : किन हुन्छ यस्तो? कसरी जोगिने?
Posted on January 15, 2017 January 16, 2017 by mysansar
– डा .विजय ज्ञवाली/क्लिनिकल मनोविद् –
2 thoughts on “छक्कापञ्जा र यमबुद्धको आत्महत्या प्रकरण : किन हुन्छ यस्तो? कसरी जोगिने?”
एक दम राम्रो लेख हो यो. मानसिक समस्या लुकाउनु पर्ने कहल को समस्या हैन. धेरै जना ठुलो या सानो रुप मा यसले ग्रसित हुन्छन बेलै मा यसलाई जानेर समस्या समाधान गर्नु सकिन्छ. यसको बारे मा आज जागरुकता फैल्यानु आवश्यक छ. सालोक्य जी यो सानो लेख ले धेरै लाई मदद पुर्याउने छ. धेरै धन्यवाद.
बैराग्यता (Depression ) लाई जित्नु छ भने दिनहु जसो ब्यायाम गरौ, मन मा लागेको चिन्ता साथि परिवार लाई भनौ , अझै तेस्ले भएन भने डाक्टर को मा जाउ. ब्यायाम जस्तो औसधि अरु केहि छैन बैराग्य को. स्वस्थ रहौ अरुलाई पनि सल्लाह दिउ .